ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: မောင်ရေချမ်း၏ အတွေးပုံရိပ်
mysterysnow August 3, 2009 at 4:04 AM
ကိုချမ်းကြီးရဲ့ ဝတ္တုတိုလေးက ဖတ်လို့ကောင်းတယ်...
Angel Shaper August 3, 2009 at 5:06 AM
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တဲ့ မောင်ရေချမ်းအတွေးပုံရိပ်တွေ လာဖတ်တယ်နော်။ ဘာမှ မပြောတတ်ဘူး။
ကောင်းတယ်။ ဒါပဲ။ ဟိဟိ
လင်းကြယ်ဖြူ August 3, 2009 at 10:01 AM
ဘ၀ ကလည်း ရထားလိုပဲနော်..သေချာတွေးကြည့်ရင်း
ဘူတာမျိုးစုံမှာရပ်..ပြီးတော့ဆက်သွား..အတွေ့အကြုံ ..ခံစားချက်မျိုးစုံဆိုတဲ့ ခရီးသည်တွေတင်ပြီး..ခရီးနှင်နေလိုက်တာ...
နှလုံးသား တစ်ထောင့်မှာတောင်..ဥသြ ဆွဲသံတွေကြားနေရတယ်နော်....
မြစ်ကျိုးအင်း August 3, 2009 at 10:24 AM
အိမ်ပြန်လမ်းမှာ ကြုံတဲ့ဘ၀မြင်ကွင်းလေးတွေကို ပြောချင်တဲ့ ဘ၀ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ ချောချောမွေ့မွေ့ ပေါင်းစပ်ပြသွားတယ်လို့ ထင်မိတယ်..။
အရေးအသားရော အယူအဆရော ကောင်းပါတယ်...။
မိုးစက်အိမ် August 3, 2009 at 12:13 PM
ဒီပို.စ် လာဖတ်တာ2ခါရှိပြီ အကိုရေ ...
အတွေးဖြစ်ပေမဲ. သတိမမူ ဂူမမြိုင်တဲ.
ဇော် August 3, 2009 at 7:18 PM
သားနှစ်ယောက်ဟုတ်ပါဘူးဗျ။ ၁ယောက်နဲ့ ၁ပိုင်းပါ။ နောက်ပြီး မအေးမြလားဗျ။ မပွင့်နဲ့ တိုင်မှာနော်။ ခိခိ။
မောင်ဝင်းကြည်ဆီကို အလုပ်က ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အပြေးလာဖတ်တာ။ ဟဲဟဲ။ အဲ့ဒါကို ဘာမှလဲ မကျွေးဘူး။ ဟွင်း။
အတွေးပုံရိပ်လေးကို သဘောကျတယ်ဗျာ။ =)
အနော် August 4, 2009 at 6:44 AM
ကိုရေချမ်းက လမ်းဆုံးဘူတာမှာ အိမ်ပြန်ရောက်ပေမဲ့
စာလာဖတ်တဲ့ အနော်တော့ ဘူတာ မဆုံးသေးလို့ အိမ်ပြန်မရောက်သေးပါ.... :(
မျက်စိထဲ မြင်သာအောင်ကို ရေးဖွဲ့နိုင်ပါတယ်
ဝတ္ထုတိုကောင်းလေး တပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရလို့ စိတ်ထဲ ကျေနပ်သွားပါတယ်
သီဟသစ် August 4, 2009 at 12:20 PM
မိုးခါး August 5, 2009 at 1:29 AM
ဘ၀နဲ့ နီးစပ်တဲ့ စာတွေကို တကယ်နှစ်သက်ပါတယ် ..
Unknown August 5, 2009 at 8:02 AM
ကျွန်တော်ရဲ့ ကြင်ဖော်ရဲ့ အတွေးလေးပါ သူအတွေးကို ပုံဖော်ထားတာပါ။ဒီလိုလာဖတ်ပြီး အားပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ကျေးဇူးပါဗျာ။
shwelannwelanwinkyi August 5, 2009 at 3:22 PM
၀င်းကြည် နာမည်ဆိုရင် တခုခုတော့ထူးချွန်ပါလိမ့်မည်...။
ကောင်းကင်ရဲ့ သမီးပျို August 5, 2009 at 3:25 PM
ဘာဟင်းမှမရပါလား ကိုရေချမ်းရယ် လိပ်စာမှားပြီထင်တယ် စကားမစပ် ဆီပုံးကဘယ်ပျောက်သွားတုန်း
Sein Lyan August 6, 2009 at 6:34 PM
ကို ချမ်းစာရေးကောင်းတယ် ဗျ
HAPPY CLOUD August 7, 2009 at 5:37 AM
စကားပြေ ချောတယ်။ အကြောင်းအရာကွက်ကွက်လေးကို သေသပ်စွာ တင်ပြထားတယ်။ တကယ့် ၀တ္တုတိုသမားပဲ။ အကြောင်းအရာပိုင်း ဘ၀သရုပ်ဖော်အနေနဲ့ များများရေးဖို့ အကြံပြုတယ်။ ဇာတ်အိမ်ကို ဒီထက်လည်း ပိုခိုင်စေချင်တယ်။ အားလုံးခြုံပြောရရင် ရသဘလောဂ့်လောကရဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။
Touch Me Not August 7, 2009 at 12:04 PM
၀တ္ထုတွေဖတ်ရတာကြိုက်လို့ အကုန်ဖတ်ပါတယ်၊ ရေးလည်းရေးချင်လို့ပါ၊ ဒါပေမယ့် မရေးနိုင်သေးပါဘူး။
ကိုချမ်းလင်းနေက တကယ်ရေးနိုင်သူပါ၊ ဆက်ပြီးဖတ်ချင်စိတ်ရှိအောင် ဆွဲခေါ်နိုင်ပါတယ်၊ ကိုယ်ပြောချင်တာလေးတွေလည်းထည့်ပြောသွားတယ်၊ ဥပမာ
“သြော်...လောကမှာ တာဝန်သိသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါလား။ဒီလူငယ်လေး တာဝန်သိစွာ လက်မှတ်ဝယ်ခဲ့ရင် ထိုသို့သောအကြောင်းများ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်။“ ဆိုတာလေးလိုမျိုးပေါ့။
၀တ္ထုတိုက အတွေးလေးနဲ့တင် မရတတ်ပါ၊ အပြင်မှာ တကယ်တွေ့ဖူးကြုံဖူးမှ ရေးနိုင်မယ်လို့ထင်တာပါပဲ။